लोकतन्त्रप्रति कम्युनिष्टहरुको ओठेभक्ति बाध्यता Globe Nepal News Portal
आफ्नो इतिहासमै पहिलोचोटी यति कमजोर भएर नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिंदैछ। यो शर्मनाक पराजयको समीक्षा कांग्रेसले गर्ला नै। तर, एउटा के कुरा पक्का हो भने कांग्रेस जनतालाई आर्थिक विकास दिन नसक्ने लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यो प्रमाणित सत्य हो। यो सँग न राजनेता छ, न सक्षम नेतृत्वको टिम छ, न लोकतान्त्रिक संस्कार छ, न सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासको ठोस खाका छ, न त यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति नै छ।
लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष गर्नु एउटा कुरा हो, जनतालाई परिणाममुखी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउनु अर्को कुरा हो। कांग्रेस यहीँनिर नराम्रोसँग असफल भएको हो। निर्वाचनको असफलतामा यही असफलता प्रतिविम्बित हुनपुग्यो।
स्वभाविक छ, कमजोर देशमा लोकतन्त्र पनि स्वत: कमजोर नै हुन्छ। यस्तोमा कम्युनिस्टहरुले यसलाई सजिलै उपयोग गरेर फालिदिने छन्। त्यतिबेलासम्मका लागि लोकतन्त्रप्रति ओठेभक्ति देखाउनु उनीहरुको बाध्यता हुन्छ। आज यिनै कम्युनिस्टहरु भारी जनमतका साथ सत्तामा जाँदैछन्। गरिब समाज, कमजोर लोकतन्त्र, सत्तारुढ कम्युनिस्ट अनि कांग्रेस समेतको प्रस्तावमा बनेको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित "समाजवाद उन्मुख राज्य” !
अब लोकतन्त्रलाई कसले बचाउने ? कसले गर्ने अब लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास ? यस्तो नहोस् कि सात समुन्द्रपारिबाट आएर "लोकतन्त्र बचाऊ" र "लोकतन्त्र पुनर्स्थापना आन्दोलन" को नेतृत्व हामीले गर्नु परोस् ।
Samajik Sanjal Darshan Rauniyar नेपाली कांग्रेस